Posted by မိုးကောင်းသူ at 7:56 PM
သြော် ဒါကို လမ်းသရဲမုန့် လို့ခေါ်တာလား
ကိုရီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ် pan cake နဲ့တူတယ်နော်
မြန်မာမှာ နေတုန်းက အိန္ဒိယန်း သူငယ်ချင်းတွေ
အိမ်မှာ ခဏခဏ စားဘူးတယ် ။သူတို့က ဂျူံနဲ့လည်း
အစ်မ.. လမ်းသရဲမုန့်နဲ့ မုန့်ရေပါး အတူတူပဲလား.. မုန့်ရေပါးပဲ စားဖူးလို့..
ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်စားဖြစ်ပါတယ်။ မုန့် နာမည်တော့အခုမှပဲသိရပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ပါအုံးမယ်။
အမရေ ဘယ်လိုဒယ်အိုးမျိုးသုံးလဲလို့ သိပါရစေရှင်... ပုံရိုက်တင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးပါလား... ပြီးတော့ မီးအနေအထား အပြင်း အပျော့ လေးလဲ သိပါရစေ.. နောက် ဒယ်အိုးကို ဆီသုတ်ရသေးလားမသိဘူး... လုပ်စားကြည့်ချင်လို့
baby taster ရေ
ရန်ကုန်အခေါ်တော့ လမ်းသရဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာတော့ မုန့်ရေပါးလို့လဲခေါ်တယ်။ ဂျုံနဲ့လုပ်တာတော့ စားဖူးဘူး။
လမ်းသရဲမုန့် နဲ့ မုန့်ရေပါးနဲ့အတူတူပဲထင်တယ်။ မန္တလေး မုန့်ရေပါးတော့ ပဲပင်ပေါက်ပါဘူးနဲ့တူတယ်။ ရန်ကုန် လမ်းသရဲတော့ ပဲပင်ပေါက်ကော၊ ဂေါ်ဖီထုပ်ကော ပါတယ်။ အရသာတွေကတော့ သိပ်မကွာပါဘူး။
ညီမ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေလောက် ခက်ပါဘူး။
အိမ်မှာဟင်းကြော်တဲ့ ရိုးရိုး အကြော်အိုး(မကပ်တဲ့) နဲ့လုပ်တာပါ။ ဒီလင့်မှာ အိုးနဲ့တကွ ပုံတင်ဖူးပါတယ်နော်။
မီးကတော့ တအားကြီးပြင်းစရာ မလိုပါဘူး။ ပုံမှန်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
မုန့်ရည်မထည့်ခင် အိုးကို (စုတ်တံသေးသေးနဲ့ ဆီစွတ်ပြီး) ပွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီး မုန့်ရည်ထည့်၊ အဆာပလာထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်နော်။
ပြန်ဖြေပေးတာကျေးဇူးပါနော်... စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ်... :)
ဒီဘလော့ကို ရောက်ပေမယ့် ကော်မန့် မရေးဖြစ်ဘူးရယ်။
မနက်ဖြန် ဘာဟင်းစားရပါ့လို့ စဉ်းစားမိတိုင်း ဒီဘလော့ကိုလာကြည့်ပြီး ဟင်းအတွဲလေးတွေမှတ်သွား၊ လိုတာလေးတွေ စာရင်းလုပ်ပြီး ဈေးသွားဝယ်..နဲ့ အဆင်ပြေနေတာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုမှပဲပြောဖြစ်တော့တယ်။
ဒါနဲ့ဆန်စိမ်းမှုန့် ဘာတံဆိပ်သုံးလဲ သိချင်ပါတယ်။
Sheng Siong ကဈေးဝယ်လို့ ကောင်းတယ်နော်။
လာလည်လို့လဲ ကျေးဇူးပါ။ ဆန်စိမ်းမှုန့်ကို မွှေးတံဆိပ် နဲ့ ယိုးဒယား တံဆိပ် နှစ်ခု စလုံး သုံးလို့ ရပါတယ်နော်။
Sheng Siong ကဈေးဝယ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်။
အမ ခုလေးတင်ညီမ ဂျုံနဲ. လုပ်စားတယ်။အမပြောတဲ. ကျူဆိုင်ရွက်လေးထ ည်.စားတာ။မုန်.နှစ်ထဲကို ကြက်ဥဖောက်ထည်. ကျူဆိုင်ထည်. ပြီးတော.ပဲပြုတ်ထည်. ဒါဘဲ။ကောင်းသလားမမေးနဲ.။မဆလာ တွေဘာတွေတောင် မလိုပါ။ဗဲ၇ီးဂွဒ် ဘဲမမရေ.....